गुठी विधेयकः ‘फिर्ता होइन खारेज हुनुपर्छ’
बिक्रम थापा बुधवार, असार ४, २०७६, १५:१६:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । उपत्यकाका गुठियारहरुले गुठी विधेयक खारेज गर्नु पर्ने माग गर्दै विशाल जुलुस निकालेका छन् । सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरे पनि खारेजी नै गर्नुपर्ने भन्दै जनसागर प्रदर्शनमाओर्लिएको हो । बुधबार काठमाडौंको माइतीघरमा विभिन्न गुठीयारहरु भेला भएर दिनभर विरोध प्रदर्शन गरे ।
आन्दोलनकारीहरुले विधेयक फिर्ता लिएर मात्रै आन्दोलन नरोकिने समेत बताएका छन् । उनीहरुले गुठी विधेयकको नाममा तलमाथि गरिए आफूहरुलाई मान्य नहुने समेत कडा चेतावनी दिएका छन् ।
प्रदर्शनमा ‘सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएर मात्रै पुग्दैन, खारेज नगर्दासम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ’ जस्ता नाराहरु लगाएत विभिन्न नाराअंकित व्यानर, आफ्नो संस्कृति झल्कने भेषभूषा र झाँकीसहित प्रदर्शनमा सहभागीहरुले गुठी विधेयकको विरोधमा सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए ।
उपत्यकाका विभिन्न भागबाट निकालिएको जुलुस माइतीघर मण्डलामा केन्द्रीत भएको थियो । जुलुस माइतीघर मण्डलामा आइपुगेर सभामा परिणत भएको थियो । बानेश्वर, बसन्तपुर, कुपण्डोल, पाटनलगायतका क्षेत्रबाट विशाल जुलुस निकालिएको हो । माइतीघर मण्डलामा आयोजित खबरदारीसभामा उपत्यकाका ४० भन्दा बढी गुठीहरूका तर्फबाट सहभागिता जनाइएको थियो ।
धार्चे गाउँपालिकामा अझै कटुवाल प्रथा ! यसअघि घरघरबाट अन्न उठाउँदै आएकोमा अहिले मासिक तीन हजार तलब दिएर प्रत्येक वडामा कटुवाल खटाइएको छ । गाउँपालिकाको चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक विकास गोजना अन्तर्गत ‘एक वार्ड एक कटुवाल’को कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । शनिवार, चैत्र २, २०७५, १५:४३:००
प्रदुषित राजधानी : के हाम्राे मास्कले धान्ला ? कस्ताे मास्क लगाउने ? भोगमास्क, मेट्रो मास्क, एन९५ र एन९९ जस्ता गुणस्तरीय मास्क लगाउँदा राम्रो मानिन्छ । यस्ता मास्कहरुले धुलोका साना कणहरु रोक्ने गर्दछ र फोक्सो सफा गर्न सहयोग गर्दछ । यसले आन्तरिक स्वास्थ्यमा राम्रो गर्ने चिकित्सकहरु सुझाउँछन् । शनिवार, चैत्र २३, २०७५, १४:३८:००